Bukela umthwalo wakho: UTom Cruise uphambene malunga neesutikheyisi ezibiweyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Icandelo lokungenisa izihambi » Bukela umthwalo wakho: UTom Cruise uphambene malunga neesutikheyisi ezibiweyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Tourism • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
UTom Cruise uyaxhuma
Ungacinga njengenye yeenkwenkwezi ezaziwa kakhulu eHollywood emhlabeni, ubuya kuba kwiligi ethile, kodwa kubonakala ukuba akunjalo.
Inkwenkwezi yaseMelika uTom Cruise ngoku udubula imuvi yakhe yeMishini engenakwenzeka kwi-United Kingdom. Cinga ukuba i-superstar njengaye ayinakuba naxhala lezinto ezibiweyo ngakumbi ngoonogada abakhusela ubomi, amalungu omzimba kunye nezinto?
Cinga kwakhona, kuba uTommy inkwenkwe wayifumana yonke imithwalo yakhe kubandakanya izinto zobuqu ezazibiwe ezazisemotweni emva kokuba efikile e-UK.
Kwaye hayi, ayibiwe nje imithwalo, imoto ye-BMW X7 ngokwayo ibiwe kuqala.
Ngaphandle kokuba imoto ibekwe kunye nokusetyenziswa kwesixhobo sokulandela umkhondo, yonke into engaphakathi kwisithuthi ihambile.
I-Cruise yayiye kudubula ifilimu kunye nomlingisi uHayley Atwell. Wayehlala kwihotele iGrand kwisixeko saseBirmingham ngelixa esenza imiboniso bhanyabhanya kwiziko levenkile ekufutshane neGrand Central xa kusenzeka ubusela.
I-BMW X7 yayipakwe ehotele xa kwenzeka ubusela. Ukuphanga kuye kwabizwa ngokuba yi "high tech" kusetyenziswa inkqubo enamanyathelo ama-4 avumela imoto engenasitshixo ukuba ivulwe ngokuphinda-phinda umqondiso we-fob ngesidlulisi.
Kuxeliwe ukuba abaphangi babaleke nemithwalo engamawaka eepawundi kukhathalelo lomlindi weCruise. Mhlawumbi unogada ebeyalelwe ukuba akhusele "umzimba" kuphela, kodwa neziqulatho zesithuthi sakhe.
Isiganeko senzeke eBirmingham kwaye nangona amapolisa akhawuleza ukulandelela nokufumana imoto esebenzisa isixhobo sokulandelela i-elektroniki esasinezixhobo, xa kufunyenwe, kwakungekho mxholo ushiyekileyo kwisithuthi.
Amapolisa athi bafumene ingxelo ye-BMW X7 (exabisa i-100,000 leepawundi) ebiwe eChurch Street, eBirmingham, ngentseni zangoLwesibini. Imoto yafunyanwa emva kwexesha elifutshane eSmethwick. Imibuzo ye-CCTV yenziwe malunga nendawo apho imoto ifunyenwe khona njengoko uphando lusaqhuba.
UTom ngomnye wabadlali abahlawulwa kakhulu eHollywood ngexabiso elifanelekileyo le-US $ 600 yezigidi ezifumana i-50 yezigidi zeedola ngonyaka. Ukuya kuthi ga malini ayenzayo kwimiboniso bhanyabhanya nganye, umzekelo, i-Cruise ifumene i-US $ 75 yezigidi ukusuka kwesine Umnqophiso: Imovie engenakwenzeka, iProtokholi yoMoya. Uyaziwa ngokwenza zonke izinto zakhe zokuzonwabisa kwaye ahambise umdlalo ophumelele amabhaso amaninzi. Waziwa kakhulu kwiifilimu ezinje ngothotho lweMishini olungenakwenzeka, umpu ophezulu, ingxelo encinci, kunye neVanilla Sky.
Ngokweengxelo, uTom Cruise unomsindo malunga nokuphanga.
NgoSeptemba 1, 2021 kwi-06: 18
Ukuseta babenocwangciso olucwangcisiweyo olu, Ku, ndiyathemba ukuba ziingubo kuphela ezingayi kuba nantlonelo kwii-bastards. Banqwenelele i-karma embi kwaye baya kuyifumana.